Ngingabona ukusesha ngegama elingukhiye lama-Amazon besebenzisa amathuluzi esofthiwe alula?
Asikho isidingo sokuthi umhlaba wokusezingeni lokusesha ku-intanethi uhambelana ngokuyinhloko ngokucwaninga ngegama elingukhiye kanye nokukhetha okufanele. Futhi kungakhathaliseki ukuthi yikuphi indawo okudingeka isebenze isu elingukhiye - kungaba ukuseshwa okujwayelekile kwi-intanethi ngezinjini ezinkulu zokusesha (njenge-Google ngokwayo, i-Yahoo, i-Bing, njll), noma ngaphezulu okuhlosiwe kodwa okwamanje ayikona isu eliyinhloko elingukhiye lokukhuphuka phezulu ezindaweni ezithandwayo zokuthenga, njenge-Amazon noma i-eBay. Umehluko kuphela phakathi kokuseshwa okujwayelekile kwe-intanethi kanye nanoma iyiphi i-ecommerce noma ye-drop-shipping-ibhizinisi yukuthi ucwaningo olunjalo kufanele lube yi-niche ehlosiwe futhi eqondiswe ukuncintisana. Futhi ngezansi ngizokukhombisa izindlela ezimbili ezilula zokuthola ukusesha okuphezulu kwe-Amazon ngegama elingukhiye. Ngakho-ke, ukusebenzisa ukuqonda okubalulekile okuncintisana ngenzuzo yakho, ngiphakamisa ukuthi ngizama isiteji esikhethekile (i-Keyword Inspector), noma i-classic bukhoma enkonzweni yakho mahhala, njengoba njalo.
I-Keyword Inspector iyisiteji esikhethekile se-intanethi esingakusiza ukuthi uhlole amagama angukhiye aphezulu e-Amazon kunoma iyiphi into yomkhiqizo noma isigaba - analogica camara fotos digital. Le nsika iyasiza futhi ngesici sayo esiyingqayizivele eyaziwa ngokuthi i-Trending Search Keyword Search. Kungakusiza ukuthi usebenze isikhathi esisheshayo-hlola isimiso futhi njalo uhlale usesikhathini nawo wonke amagama angukhiye amasha usanda kugibela phezulu kokuseshwa kwama-Amazon. Okungaphezulu - I-Keyword Inspector inezinye izinketho ezimbili ezishisayo kakhulu (ezibizwa ngokuthi i-Indexation Tester ne-Reverse ASIN), ezenza kahle kakhulu uma udinga ukuthi uhlu lwakho lwemikhiqizo lulungiselelwe ngokuphelele ukuze kufinyeleleke ukuvezwa kwe-intanethi okubanzi kunayo yonke. Into embi kuphela mayelana nalesi sigaba sokucwaninga ngegama elingukhiye yilelo ngeshwa, ayikho inguqulo yamahhala etholakalayo. Kuvele isilingo ukuthi unqume ukuthi uzohamba yini ukubhalisa njalo ngenyanga noma uqhubeke ungena ngaphandle kwalo.
Njengoba ngishilo ekuqaleni, ukucwaningwa kwegama elingukhiye okwenziwe ngesilinganiso kufana nokufanayo, empeleni kunganaki - kungakhathaliseki ukuthi ulungisa amakhasi osesho lokuqala lwe-Google, noma osebenza ohlwini lokuthengiswa kwemikhiqizo ye-ecommerce noma ye-drop shipping-shipping. Ngisho ukuthi ngesizathu esithile i-Keyword Planner yethu edala ye-Keyword ye-search giant yomhlaba ilahlekelwe kakhulu ekuthandweni, ikakhulukazi eminyakeni yamuva. Ngama-mass amaningi e-platforms e-ecommerce ehlukahlukene kanye namathuluzi ahlobene ahambisana ngqo nezidingo zawo nemigomo, uhlaka lwangempela lwe-Google (a.k.a.Google AdWords) selugcine amandla alo angaphambili ngokugcwele. Ngisho ukuthi i-Keyword Planner iyisithuluzi esisodwa phakathi kwezici eziningi ezihlukahlukene (futhi njalo zikhululekile!), Ezifakwe ku-AdWords ngokuzenzakalelayo. Futhi kusasebenza kakhulu hhayi kuphela nje kohlaka olukhangayo lokukhangisa, kodwa ukuthola, isibonelo, ukusesha okuphezulu kwama-Amazon ngamagama angukhiye abalulekile kanye nemishwana eyinhloko yemisipha ende.
Emva kwakho konke, ake sibhekane nakho - izinto ezizungezile zilokhu zishintsha njalo. Kodwa akusho ukuthi sonke kufanele siqhubeke sibheka kuphela amathuluzi omshini, amathuluzi esofthiwe, noma izixazululo zamuva nje zoklanywa. Yebo, ngezinye izikhathi zikhulu, kodwa ngokwami, ngisakholelwa ukuthi i-Google Keyword Planner isadlala, okungenani lokho akuyona imisebenzi ephelele kakhulu yokuhlala ivuselelwe ekusetshenzisweni komkhiqizo we-Amazon okuthandwa kakhulu ngamagama angukhiye angakwesokudla.